Xidig Ka Tirsan PSG Oo Xaqiijiyay Tagayo Dhamaadka Xagaagan %
Xidig Ka Tirsan PSG Oo Xaqiijiyay Tagayo Dhamaadka Xagaagan
FranceLatest Sports News
Xidiga heerka caalami ee qaranka kubada cagta Faransiiska wiilka lagu magacaabo Ben Arfa ayaa wuxuu ka tagayaa dhamaadka xili ciyaareedkan kooxdiisa Paris Saint-Germain, sida uu ku xaqiijiyay ciyaaryahankaan baraha bulshada.
31-sano jirkaan ayaa wuxuu awoodin inuu xili ciyaareedkan kooxdiisa ugu soo bilowdo wax kulan, isagoona aanan awoodi karin inuu si xur ah uga tago, maadaama qandaraskiisa uu ka dhacayo sanad ciyaareedka soo aadan.
“Waqtiga gaaban ee xiisahayga PSG waa ay soo gaba gaboobi doonaa, inkastoo aan ay jiraa wax xoogaa dhibaato ah, hadana waxaan ku faraxsanahay inaan xirto maaliyadda [Paris],” ayuu yiri, laacibkaan reer France.
“Waxaan ka haystaa saaxiibadayda qaarkood wax xoogaa xasuus oo cajiib cah iyo taageerayaash waali ah, kuwaasoo dhamaantooda aan ka helay taageero badan, waana jeclaan doonaa kooxdaan mar walba.
Sikastaba, xidigaan ayaa wuxuu PSG uu kusoo biiray sanadkii 2016-kii markaasoo uu uga yimid dhigeeda Nice, laakiin marnaba ma uusan helin wax kulan ah oo uu ugu soo bilowdo kooxdiisa ama xitaa inuu si joogto ah uhelo.
Ben Arfa, oo ah ciyaaryahan khadka dhexe iyo garabka weerarka ka dheeli kara ayaa wuxuu horey usoo maray naadiga Newcastle United ee wadanka Ingiriiska iyadoona ay tahay wax aan la ogayn halka uu afka aadin doono ama uu ku biirayo.
Achraf Hakimi Oo Ka Hadlay Hadii Uu Real Ka Tagayo